» “को’रोना संक्रमणबा’ट नर्स सावित्री भट्टराईको दु’खद नि’धन, आफन्तको स्टाटसले सबैलाई रुवा’यो !!!! “को’रोना संक्रमणबा’ट नर्स सावित्री भट्टराईको दु’खद नि’धन, आफन्तको स्टाटसले सबैलाई रुवा’यो !!!! – हाम्रो खबर
“को’रोना संक्रमणबा’ट नर्स सावित्री भट्टराईको दु’खद नि’धन, आफन्तको स्टाटसले सबैलाई रुवा’यो !!!!
हाम्रो खबर संबाद दाता 172 Views
“काठमाडौं :- को’रोना संक्रमणबाट नर्स सा’वित्री भट्टराईको दु’खद नि’’ धन, आफन्तको स्टाटसले सबैलाई रुवायो ! || को’रोना संक्रमणबाट नर्स सावित्री भट्टराईको दु’खद नि’धन, आफन्त’को स्टाटसले सबैलाई रुवायो !को’रोना संक्रम’ णबाट नर्स सावित्री भट्टराईको दु’खद नि’ ’धन, आफन्तको स्टाटसले सबैलाई रु’वायो !।
“को’रोना भाइरस संक्रमणबाट नर्स सावि’त्री भट्टराईको नि ’ध; न भएको छ । नेपाल नर्सिङ संघकी कोषाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले जेष्ठ २ गते नर्स भट्टराईको नि’धन भ; एको जानकारी दिनुभयो । उहाँ पछिल्लो समय विराटनगर नोवेल हस्पिटल’मा का’र्यरत हुनुहुन्थ्यो ”
“यो पनि “उपभोक्ता समूहको वनमा, बाख्रा चराउँदै घाँस लिएर आउँदै गर्दा डिउटीमा रहेका सेनाहरुले ,विना बहाना नि’र्घात कु’टपि’ट”
“काठमाडौ । उदयपुरमा बाख्रा चराउन गएकाहरु घाइते अवस्थामा फर्किएका छन् । उनीहरुले आफुलाई नेपाली सेनाले कु’ टेको ब ताएका छन् । घाइेतहरुले अहिले स्थानिय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । केही महिला समेत कु टि एको पीडितहरुले बताएका छन् ।”
“मंगलवार सांझ भुल्के सामुदायिक बन नजिक बाख्रा चराउन गएको बेला सेनाले कु ‘टे ‘को उनीहरुको भनाई छ । साँझ करि ४ वजे त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्के स्थित १८ नं। बाहिनी अड्डाका डिउटीमा रहेका सेनाका जवानहरुले आफुहरुलाई कु’टे’को बताएका छन् । घाइते भएका स्थानीय ४० वर्षिय मोहमद इसराइल, २० वर्षिय रेतुन खातुन, ३४ वर्षिय मन्जु खातुन लगायतको उपचार भइरहेको छ ।”
“घा,इते मध्ये मोहमद इसराइलको अवस्था ग,म्भिर छ । उनलाइै सबैभन्दा बढी चो’ट ला’गे’को छ । कोही घाँस काट्न र कोही बाख्रा चराउन त्यस तर्फ गएको उनीहरुले बताएका छन् । बाहिनीको बाहिर पट्टी घाँस काटेको अवस्थामा निहुँ खोजेर सेनाका जवान आएको पीडितले बताएका छन् । भुल्के सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमा बाख्रा चराउँदै घाँस लिएर आउँदै गर्दा डिउटीमा रहेका सेनाहरुले विना बहाना नि’र्घात कु’टपि’ट ग’रे’को प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।”
“इसराइल घाँस काटेर आउँदै थिए भने महिलाहरु बाख्रा चराउन जंगल गएका थिए । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार हामी चार पाँच जनाले बाहिनीले तारबार गरेको भन्दा पूर्वपट्टिको जंगलमा बाख्रा चराउँदै घाँस का’ट्दै थियौं अचानक सेवाका जवान आएर कु’ ट्न थाले मन्जु खातुनले बताइन् । ५ जनाको संख्यामा आएका मध्य एक जनाले आफुहरुलाई कु’टे’को उनको भनाई छ । अन्य चार जनाले भने उनलाई नकु,ट भनेर रोकिरहेका थिए ।,